कुनकुन अंगमा स्पर्ष गर्दा महिला बढि उत्तेजित हुन्छन् ?
एजेन्सी कार्तिक १२, 2076
काठमाडौं । विभिन्न प्रकारका अध्ययन अनुसन्धानले महिलामा पुरुषको तुलनामा शारीरिक सम्बन्ध बनाउने क्षमता आठ गुणा बढी हुन्छ । अध्ययनअनुसार शरीरका विभिन्न अंगमा छोएमा महिलाहरु शारीरिक सम्बन्ध बनाउन उत्तेजित हुन्छन् ।
सामान्यतया पुरुषको तुलनामा महिलाहरु शारीरिक सम्बन्ध बनाउन तयार हुने समय धेरै लाग्छ । आज हामीले महिलाका विभिन्न संवेदनशील अंगहरुका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दछौँ । जुन अंग चलाएमा महिलाहरु उत्तेजित हुन्छन् ।
महिलाहरुको शरीरको सबैभन्दा धेरै संवेदनशील अंगको रुपमा दुइ खुट्टाको बीच भाग हो । त्यहाँ रहेको क्लाइटोरिसले महिलालाई सबैभन्दा बढी उत्तेजित बनाउँछ ।
त्यस्तै घुडाको पछाडि पट्टी चलाएमा पनि महिलाहरु उत्तेजित हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । महिलाको घुडाको पछाडी पट्टीको भागमा हातले स्पर्स गरेमा उनीहरु उत्तेजित हुन सक्छन् ।
महिलाको गर्दनको पछाडीको भाग पनि संवेदनशील हुन्छ । त्यहाँ चलाएमा महिलाको स्वासप्रस्वासमा समेत परिवर्तन आएर उत्तेजित हुन्छन् । त्यसैले गर्धनको पछाडिको भागमा चलाउँदा उनीहरु शारीरिक सम्बन्ध बनाउनका लागि तयार हुने सम्भावना अधिक हुन्छ ।
महिलाको ओठमा चुम्बन गर्दा पनि उनीहरु उत्तेजित हुन सक्छन् । यो सजिलो र सबैभन्दा धेरै प्रयोगमा आउने विधि हो । एजेन्सी
रसियाका यौनकर्मीलाई यस्ता पुरुषसँग यौनसम्पर्क नगर्न भनेपछि...
काठमाडौँ । रसियाकी एक वरिष्ठ सांसदले रसियाली महिलाहरुलाई विश्वकपको समयमा गैर–गोरा विदेशी पुरुषसँग...
के ७ः३७ बजेको सेक्स आनन्ददायी होला त ?
काठमाडौं । यौन सम्पर्क गर्ने कुनै समय हुँदैन । यौन चाहाना जतिबेला पनि हुनसक्छ । तर, शोधकर्ताहरुले...
काठमाडौँ । प्रेमीले गाडेको अवस्थामा फेला परेको एकजना युवतीको शवको अनुसन्धानपछि अदालतमा सुनुवाई हु...
काठमाडौँ । आफूमा भएको यौन क्षमताअनुसार प्रत्येक पुरुषले आफ्नो महिला साथीको इच्छा पूरा गर्ने प्रया...
धर्मको भेषमा समाजलाई लुट्नेहरु धेरै छन् । बाबाको ढोंङ रचेर विभिन्न अश्लील हर्कत मच्चाउनेहरुको पनि...